Vuoksa - Lake of Leningrad Region
Vuoksa - echibini, okuyinto isendaweni Karelian Isthmus, Leningrad esifundeni, ayikhulu namashumi amathathu ukusuka Petersburg. Itholakala eningizimu-ntshonalanga kusukela emzini Priozersk.
Ngishilo Echibini emuva Novgorod Chronicle, yase iqamba Uzervoy. Igama livela Karelian Uuzijärvi. Ilihumusha ngokuthi "echibini entsha".
Kwaze kwaba sekhulwini le-17, inani labantu eduze nogu Vuoksa umsuka ikakhulu Karelian, kamuva kuthiwa lathathelwa indawo Finnish. Khona-ke kwaba khona futhi igama elisha echibini - Uusiyarvi. Yahlala isebenza kuze kube maphakathi nekhulu lama-20. Kamuva ichibi lethiwa samanje - echibini Vuoksi.
Kuyathakazelisa ukuthi kulezi zindawo e neminyaka engu-80 wathwebula "Izihambi ungahambi lapha."
Le ndawo Imininingwane kwesigubhu kuyinto 108 square metres. km, ke ewela wesithupha iziqhingi eziningi.
Vuoksa - echibini has a umsuka glacial. Yasungulwa eziningana eminyakeni eyinkulungwane edlule. Nakuba yeqhwa zinhlanga, eshiya anemifantu ejulile ogwini emachibini izigaba ophucuziwe egwadle, okuyinto yaziwa ngokuthi "yemvu emabunzini".
Ekhona ibalazwe ukujula Lake Vuoksa kubonisa ukuthi ukucindezeleka esiphezulu 25 m, ukujula isilinganiso ilingana ngamamitha amahlanu. Isendlalelo phansi imbozwe lodaka brown ezinkulu noma grey umbala namatshe amaningi. Mhlawumbe ngenxa yalokhu, amanzi kunalokho ezingcolile kuka ahlanzekile. Han coast, eziyinkimbinkimbi, kanye capes eziningi, amatheku.
Ezokudla ichibi kungenxa emfuleni flow. Izinga amanzi kuye isikhathi sonyaka ububanzi kufike ku-80 cm, seqiwe safinyelela ngoMeyi. owumthelela Largest kwesigubhu umfula of the gama elifanayo.
Leli chibi elihle kakhulu futhi olunothile. Kuye njalo yabakhanga zezivakashi nabadobi. Futhi sekuyisikhathi eside Petersburg kube ozithandayo eholidini.
Ungakwazi ukuchitha isikhathi hhayi kuphela kwaleli chibi, kodwa nakwezinye izingxenye ezweni lakhe. On echibini kunamakhulu eziningana iziqhingi. Elikhulu kunawo wonke kuyinto izinyamazane, kodwa-ke kubizwa ngokuthi Losiny (kwaze kwaba sekuqaleni kwekhulu lama-20, inketho yesibili kwakunguDodayi esemthethweni). Itholakala nasengxenyeni eseningizimu, ubude imayelana 5 km ubude - 4 km.
Esiqhingini unyaka wonke sabantu ababili nje benoFakazi indawo. Kukhona marina for izikebhe. Phakathi nezinyanga zasehlobo, izivakashi kanye nabadobi uhlezi ogwini Deer Island.
Iningi lesi siqhingi ezembethe amahlathi zikaphayini kanye ngesihlahla sonwele endaweni ukuphumula libekelwe i umhlaba wokulima, ikakhulukazi ezimfundeni. Kunezindlela eziningi imigwaqo, futhi ungakwazi ukufinyelela kuso nge ukuwela.
Ezinye iziqhingi ezinkulu kukhona enamadwala, Nikitinsky, Bear, inamagquma, Isimangaliso, gone, okulingene elikhulu futhi Khanyisa.
I engavamile kakhulu bullfinch ke ine ukuma ezithakazelisayo ngesimo yokhalo enamadwala nge ihlathi obukhulu. Ububanzi esiqhingini ifinyelela amashumi amaningana amamitha, futhi ubude - abangamakhulu amaningana.
Njengendluzele, zikhona ezikhulayo uphayini, ngesihlahla sonwele birch, e-aspen, grey futhi Alder abamnyama, Maple futhi Linden.
Vuoksa - echibini, ehlanganisa ahlukene kodwa oxhumene sifinyelela. It Priozersky, Sinevsky, Nekrasov futhi Krotovskaya. Esokuqala engajulile kakhulu, amamitha 5 kuphela ukujula walo omkhulu. Nekrasovsky ukufinyelela enhliziyweni umgodi pyatnadtsatimetrovuyu. It is kahle phakathi eziqhingini Omkhulu Ephakathi kanye nezinyamazane, nangabo Strait, ohlukanisa engxenyeni esenyakatho yokugcina esuka ezwekazini.
Flatwater Landelayo - Krotovskaya. It ithatha ingxenye enkulu kunazo insimu ka echibini. Imingcele yayo igqamile, Bear, Deer Island nabanye ukuthi akudingeki amagama. Izindawo ukujula yayo ifinyelela 15-25 m kodwa ngokuvamile akuyona ezingaphezu kuka 5 m. Kusukela ogwini olusempumalanga ubabonisa uhambahamba wokuxovela ewumngcingo, phansi esemgwaqweni at ibanga 10 m ebusweni.
Flatwater Okwesine - Sinevsky. Itholakala phakathi esiqhingini Deer, Maryino inhlonhlo kanye ogwini echibini. Kutholwe eduze nedolobhana okwesibhakabhaka.
Lake Vuoksa: Phumula
Sekuyisikhathi eside endaweni ezungezile ichibi, kube lithandwa kakhulu yizivakashi. Imvelo kule ndawo enhle kakhulu. Ngokukhululekile futhi kabanzi kukhona ubude, libe lincane izihlahla zikaphayini, cishe ngaphandle esinindolweni, izinyawo zabo embozwe moss kanye ulele ezikhulayo cranberry kanye bearberry. Ehlathini, ungathola eziningi amakhowe.
Abanye amaholide uncamela ehlala ematendeni, abanye bahlale amahhotela, ukuzilibazisa izikhungo. On indawo yabo kukhona zokudlala, ugibele, ibhola ne-volleyball Amasimu.
Ngesikhathi sasehlobo, echibini ungaya ngesikebhe ebusika - Snowmobiling, Ukushushuluza noma ngezicathulo rink. Lapho isimo sezulu esibi nihambahambe phezu Plessis enkulu akudingekile, kungcono ukukhetha yomgwaqo phakathi iziqhingi.
Ngenxa ukugeleza enkulu izivakashi endaweni kwesigubhu ingcolile kakhulu, ngesinye isikhathi kunzima ukuthola indawo ihlanzekile.
Vuoksa - chibi izivakashi zalo ezikhangayo, omunye wabo kungabonwa eGulf of inhlanzi. Lokhu amawa encane - amawa mpo egwadle, etholakala eduze kwamanzi.
Lake Vuoksi Ukudoba
Ichibi futhi bemthanda abalandeli uhlale uthule nenduku yokudoba. Kukholakala ukuthi endaweni iningi izindawo Ummbila ke ewela echibini Vuoksi. Ukudoba (izibuyekezo siliqinisekise) cishe ngaso sonke isikhathi iphela kokubamba izinhlanzi eziningi. Lapho ukuqeqeshwa okukhethekile bangakwazi ukubamba ngempela uhlobo olungavamile.
Ngokuvamile lo lolo babamba izinhlanzi, evamile enyakatho ntshonalanga echibini: Pike, perch, roach, bream, salmon kancane, trout futhi whitefish. Naphezu kwakho konke lokhu ngobuningi, kungaba nzima Wabasaqalayo lapha ngenxa umncintiswano omkhulu.
Ngokuvamile perch izinhlanzi, ngezinye izikhathi ukuba mikhulu. Ebusika kungenzeka ukubamba cishe kunoma iyiphi lolo.
Rukonozhka Madagascan Elethu-aye: incazelo kanye nezithombe
Reserve Ilmensky. Izilwane Ilmen Reserve. Natural Science Museum Ilmen Reserve
Jellyfish Aurelia: incazelo, okuqukethwe zokukhiqiza. Aurelia - jellyfish eared
Iyisilwane esisengozini kuyiplanethi yethu
Galina Shcherbakova: Biography, lokusungula, umndeni
Indlela efanele enze phansi screed ngezandla zabo?
Ewusizo izingane iresiphi: ubisi Pudding. Three ezahlukeneyo dessert yokupheka
Sladkovskiy Aleksandr Vitalevich: Biography
Amafilimu mayelana kumathroli. Kusukela eyesabekayo amaphrojekthi 90 kule mokyumentari uhlobo
Brazil, eRio de Janeiro. Rio Carnival
Ukumamatheka Sardonic - uphawu ngqi
Indlela ulungiswe okusheshayo ethangini gas?